Naannoo Amaaraatti dhaabbilee daldalaa 724 irratti tarkaanfin fudhatame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Naannoo Amaaraatti dhaabbilee daldalaa 724 irratti tarkaanfin fudhatame
On Mar 17, 2020 51
Finfinnee, Bitootessa 8, 2012 (FBC) – Naannoo Amaaaraatti dhaabbilee daldalaa vaayrasii koroonaa sababeeffachuun daballii gatii taasisan 724 irratti tarkaanfiin fudhatamuu Biiroon Daladalaa fi Misooma Gabaa naanniicha beekseera.
Hogganaan biirichaa obbo Birhaanuu Xamyaalaaw Faanaa Broodkaastiing Koorporeetif akka himanitti, vaayrasicha sababeeffachuun dhaabbilee daldalaa xaafii, barbaree fi qorichootarratti daballii gatii taasisaan 724rratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan.
Naannichatti rakkoolee kana fakkaatan hordofuun itti fufinsaan tarkaanfii fudhachuuf koreen ijaarraamee hojjechaa jiraachuu himaniiru.
Dhaabbilee carraa kana fayyadamuun daballii gatii hin barbaachifne taasisaanirratti tarkaanfiin fudhatamu cimee kan itti fufuu ta’uu ibsaniiru.
Kibrawasan Nuuruutu gabaase
Baankichi Eebila 1-2, 2012 tajaajila hin laatu
Kaffaltoonni gibiraa sirna kaffaltii elektirooniiksiin tajaajilamuu akka itti fufan…
Ityoophiyaan Ji’ootarmaala Tullu Mooyyee waliin waliigaltee bittaa anniisaa…
Oromiyaan tasgabbii gabaa fi dhiyeessii oomishaalee qonnaarratti hojjechaa jiraachuu…
Kaffaltoonni gibiraa sirna kaffaltii elektirooniiksiin…
Ityoophiyaan Ji’ootarmaala Tullu Mooyyee waliin…